Ukubambisana kuka-2018 Sinocare ne-YUELU SUMMIT 2018-News-Sinocare
Ukubambisana kuka-2018 Sinocare no-YUELU SUMMIT 2018
Isikhathi: 2019-08-16 Hits: 205
Kunesisho esidumile embonini ye-internet yaseChina, okusho ukuthi, “kukhona iWuzhen empumalanga kanye noYuelu entwasahlobo”, okukhombisa ukuthi iWuzhen ineNgqungquthela Yomhlaba Ye-Inthanethi futhi kukhona Ingqungquthela Ye-Internet Yuelu entwasahlobo. Inhloso yasekuqaleni ye-Internet Yuelu Summit ukumema osomabhizinisi base-Hunan be-inthanethi nabanye osomabhizinisi ukuthi bahlangane futhi bashintshane ngentaba yaseYuelu ekuqaleni kuka-Ephreli unyaka nonyaka. Kuze kube manje, le ngqungquthela ibanjwe ngempumelelo amahlandla amane, yaba umcimbi womkhakha we-inthanethi ongumakhalekhukhwini nomkhiqizo odumile.
ISIKHATHI SOKUVULA ISIKHUMBUZO SASEYUELU 2018
Ngo-Ephreli 3, ingqungquthela ye-Intanethi yeYuelu Summit 2018 yabanjwa njengoba bekuhleliwe. Indikimba yale ngqungquthela ibisithi “the Thriving Intelligent Innovation”. Kwenziwe yiChangsha National Hi-Tech Industry Development Zone yaseChangsha futhi ixhaswe nguMnyango wePropaganda weHunan Provincial Party Committee, iHunan Provincial Cyber ​​Information Office, iHunan Economic and Information Commission, iHunan Xiangjiang New Area, iHunan Radio neThelevishini Isiteshi kanye amanye amayunithi. Imidondoshiya ye-inthanethi yamaselula ihlangane eChangsha ukwakha ipulatifomu yebhizinisi le-inthanethi nokukhuthaza ukuhlanganiswa okujule kwe-inthanethi nezimboni. Umcimbi okhethekile wezempilo ngaphansi kwendikimba ethi “Smart Blueprint, Health Mission” obusingathwe yiSinocare Inc. nawo uqale ngaphansi kokulindelwe okukhulu.
Ukubambisana kwamaqembu amaningi ukwenza ipulani yeWIT120
Umbiko weNgqungquthela Yeshumi Nesishiyagalolunye yeQembu lenze isitatimende esicacile engxenyeni “Yokwenza ngcono izinga lokuvikelwa nempilo yabantu, ukuqinisa kanye nokuqhamuka kokubusa kwezenhlalo” ukuthi “Ukuqalisa Isu Eliyimpilo LaseChina” kuzoba isu elibaluleke kakhulu ezweni lethu. Ngokuya ngomqondo we "Comprehensive Health" kanye "nenqubomgomo yezempilo yeQembu esikhathini esisha", lo mbiko udwebe ipulani yezempilo enkathini entsha.
IPHINI LOMQONDISI WEZEMPILO NOKUHLELA KOMKHAYA UKHOMISHINI WESIFUNDAZWE SASE-HUNAN BEKETHULA INKULUMO EMHLANGANWENI
Njengengxenye ebalulekile yokwakhiwa kweChina okunempilo, uchungechunge lobuchwepheshe obusha nemishini emisha, efana nedatha enkulu, i-computing yamafu, ubuhlakani bokufakelwa, nokunakekelwa kwezokwelapha okuhambayo, njll., Kuyathuthukiswa futhi kukhiqizwa ngokuqhubekayo, futhi amaphrojekthi wokwakha ezempilo kakhulu kuvezwe. ULong Kaichao, iPhini likaMqondisi weKhomishini Yezempilo Nokuhlelwa Komndeni eSifundazweni SaseHunan, ugcizelele ukuthi sidinga ukuthatha umoya weNgqungquthela Yeshumi Nesishiyagalolunye njengenkombandlela yokuthuthuka kwalesi sithangami, sikhombise ukuvela kwemisebenzi kahulumeni, futhi siphathe uhlelo oluhle lokuhlakanipha ukunakekelwa kwezokwelapha ngaphansi kwenkathi entsha. Ngokuya ngale mpilo ephelele, iSinocare Inc. ihlose ukukhombisa impumelelo yakamuva yesayensi nezobuchwepheshe kwisayensi yezokwelapha. Ngezingxoxo eziningi, sizibophezele ekutholeni izindlela ubuchwepheshe be-WIT120 obungasungulwa ngazo, futhi ngokubambisana sicabange ikusasa labantu abahlakaniphile nabanempilo, nokusiza yonke impilo ezungeza kahle ngezempilo zomhlaba wonke.
ISALONI SESIHLOKO ESIKHULU
Izihambeli, kufaka phakathi uSolwazi Zhou Zhiguang, uNobhala WeKomidi Leqembu leSecond Xiangya Hospital yaseCentral South University, uLi Shaobo, uSihlalo weSinocare Inc., uZhang Fan, uMsunguli kanye noSihlalo we-Ansun Angel, uLiu Quan, uSihlalo weZhixiang Health Technology (Beijing I-Co, Ltd. kanye noMsunguli we-Zhimai Pharmacy Engine, u-Li Chengzhi, umsunguli kanye ne-CEO ye-Beijing Dnurse Technology Ltd., njll, wabamba iqhaza kwi-salon thematic yezempilo ephelele. Baqale izingxoxo ezishubile ngendikimba ethi "Ukuhlanganisa kanye Nokwenza kwe-Intanethi kanye Nokulawulwa Kwezifo Ezingamahlalakhona" ukuhlola nokwakha uhlelo olusha lwezokwelapha kanye nemvelo entsha ngokuzayo.
U-LI SHAOBO, USIHLALO WE-SINOCARE INC., WAYETHULA I-WIT120 KWABASEBENZI
Phakathi kwaleyo micimbi ekhethekile yeNgqungquthela yaseYuelu, izinto zobuchwepheshe obuphakeme zenze umcimbi we-Comprehensive Health wahluka. Lokhu akugcinanga ngokwandisa umthelela weSithangami Sase-WIT120 se-Yuelu Summit kule mboni, kodwa futhi kuqinise nesithunzi sephayona lomkhakha. Ngaphezu kwalokho, kudlulisa umqondo wesayensi nobuchwepheshe ukudala impilo engcono, nokwakha uchungechunge lwezimboni oluhlakaniphile oluxhumanisa iziphathimandla zikahulumeni, izinkampani ezikhiqizayo, izinhlangano zezokwelapha nabantu.
Umuzwa wemishini nobuchwepheshe kukhulisa imboni yezempilo
Ngenkathi yokuziphendukela kwezobuchwepheshe, i-WIT120 idlule ezigabeni eziningi zentuthuko, kanti nemisebenzi kahulumeni nayo iyavela. Kepha imithombo yabo yasekuqaleni isalokhu iyisifiso sethu sokuqala futhi igcina inhloso yethu ngokuqinile embonweni wokusiza imboni yezempilo yabantu ngesayensi nobuchwepheshe futhi ihambise umkhankaso weChina enempilo ukuyenza iqhubekele phambili. Njengebhizinisi lobuchwepheshe obuphezulu elizibophezele ekusetshenzisweni kobuchwepheshe bokubheka izinto eziphilayo ukucwaninga, ukuthuthukisa, ukukhiqiza, nokuthengisa imikhiqizo yokuthola ngokushesha izifo ezingamahlalakhona, iSinocare Inc. iyaqhubeka nokwenza imizamo yokuthuthukisa iMpilo China.
U-DU HUI, UMQONDISI WOMKHIQIZO WOKUTHUTHUKISWA KOMKHIQIZO NOKUTHUTHUKISWA KWEBANDLE, INC., WAYETHULA “IMITHOMBO YOMTHOLAMPILO” KWI-MEDIA
Ukusiza amakhemisi ukuthi asebenzele kangcono iziguli futhi aphathe kahle izifo ezingalapheki, iSinocare Inc. yethule amamodeli asebekhulile e-United States ngokubheka ngokombono wabanikezeli bamathuluzi ukudala "Umtholampilo Wemizuzu" wasekhaya ukunika iziguli amandla okubheka eduze izifo zazo futhi uthole izinsizakalo ezihambisanayo. Okuqukethwe kwisevisi ye- "Sinocare Minute Clinic" ehlanganisa izifo ezingalapheki ezinhlobonhlobo zokuthola izinkomba nokuthola i-glucose yegazi, inani eliphelele le-cholesterol (TC), i-high density lipoprotein cholesterol (HDL-C), i-low density lipoprotein cholesterol (LDL-C) ), i-glycerin trimyristate (TG), i-BMI nenani le-uric acid. Ingazitholela ngokushesha izinkomba zezifo ezingamahlalakhona kungakapheli nemizuzu futhi isize iziguli ukuthi zihlaziye, zihlole, zibikezele futhi zifundise, futhi zinikeze ukuphathwa kwedatha nezisombululo ezenziwe ngezifiso, njll.
UPROFESA YANG WENYING WABE WACHAZANA NGOLWAZI LWESIKHATHI NGEZIFO ZE-METABOLIC NEZEMPILO KAZWELONKE
Kulesi seshini seComprehensive Health, abaholi bezokuqondisa baveze ukuthi sidinga ukuhlanganisa ithiyori kanye nokwenza ukuze kuthuthukiswe imboni. UProfesa kanye nomfundisi osesikhundleni esiphakeme uYang Wenying, uMqondisi Wezokwelapha Zangaphakathi eChina-Japan Friendship Hospital kanye nodokotela omkhulu we-Endocrine and Metabolic Disease Center of China-Japan Friendship Hospital, babelane ngolwazi olukhethekile ngezifo ze-metabolic kanye nempilo kazwelonke. Njengesazi esaziwa endocrine sasekhaya, uSolwazi Yang Wenying unolwazi olujulile ngesifo sikashukela. Usebenza kakhulu ekutadisheni izehlakalo nezici zesifo sikashukela, isifo se-metabolic nezinye izifo eChina. USolwazi Yang uthola izibonelelo ezikhethekile ezivela eMkhandlwini Wombuso futhi usezuze imiklomelo eminingi. Ubuye abe ngusihlalo ohloniphekile we-Chinese Diabetes Society kanye nephini likamongameli we-Asian Diabetes Society.
Izihambeli zezimboni nezamabhizinisi zethule ababambiqhaza impumelelo kanye nezikhombisi-ndlela zakamuva embonini. UZeng Renxiong, uSihlalo kanye noMphathi Omkhulu weHonghua Capital Group Co, Ltd. kanye neHonghua International Medical Holdings (Group) Co, Ltd., wethule inkulumo yosuku ethi "Izinsizakalo ze-intanethi ezintsha zezokunakekelwa kwezempilo nokulwa nobuphofu emadolobhaneni". U-Yuan Hong, uchwepheshe we-State Council Special Allowance, uchwepheshe omkhulu we-National New Drug Creation Project kanye ne-973 Project, kanye nePhini likaMongameli weSibhedlela Sesithathu i-Xiangya saseCentral South University, wabelane ngolwazi lwakhe ekuphathweni kwengcindezi yegazi ngenkathi ye-intanethi ephathekayo. . USolwazi Yi Fayin, uchwepheshe odumile wezokwelapha waseChina, uMqondisi Wezincwadi zaseHunan University of Traditional Chinese Medicine, kanye noMqondisi weJiuzhitang National Medical Museum, wabelane ngolwazi lwakhe nge-Intanethi nokuphathwa kwe-TCM.
Izethulo nezinkulumo ezinhle azikhombisanga nje kuphela ukuhlola nokufezeka kwezikhungo zezokwelapha, izimboni, namabhizinisi ngaphansi kobuholi bukahulumeni, kodwa futhi kwethule nohlelo lwentuthuko lwemboni nekusasa lenkampani. Abamele abaningi bengqungquthela ngokuhlanganyela bahlola indlela yentuthuko ye-WIT120.
Ukwenza “Izinzuzo Zezokwelapha + Zomphakathi” nge-li-ove
Ukuzuzisa abantu ubuhlakani bemboni yezokwelapha, kanjalo neWIT120. Izindlela ezibonakala zibanda kakhulu zesayensi nezobuchwepheshe zifuna izinzuzo zomhlaba wonke kubantu. Esigabeni se- “Reader” somcimbi okhethekile weComprehensive Health, abasebenzi bakwaSinocare Inc. benze impumelelo ye-WIT120 kwezenhlalakahle ngendlela yokufunda ethandekayo, okwaba yinto evelele yosuku.
Laba bafundi bahlanganisa izingane ezinesifo sikashukela sohlobo 1 esivela eXiangya Kangle Camp kanye namalungu omndeni wazo, kanye "nezingelosi ezimhlophe", abahlengikazi boMnyango We-Endocrinology esibhedlela i-Second Xiangya Hospital eCentral South University. ISinocare Inc. ihlele ngokubambisana iXiangya Kangle Camp iminyaka eminingi futhi izinikele ekugxileni ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 1. Amavolontiya aseSinocare nawo eze kulo mcimbi. Ngaphezu kokunikeza ngamamitha wamahhala weSinocare eglucose egazini ezinganeni ezinesifo sikashukela sohlobo 1, babenethemba lokuqhuba imfundo nokwelashwa okulinganiselwe kwezingane ngemisebenzi yesihle efana neXiangya Kangle Camp ukuqinisekisa ukuthi izingane eziningi zingakhula kahle futhi zijabule. Ngenxa yokwenyuswa kwe-WIT120, lezi zingane ezithandekayo zingagcwaliswa ngethemba nokukhanya njengezingane ezinempilo. Izingane ezingenacala, izingelosi ezimhlophe kanye namavolontiya eSinocare afunda ngokuzwakalayo Ngingephupho futhi wonke umuntu owayesendaweni yesigameko wathinteka kakhulu.
UPROFESA ZHOU ZHIGUANG, UDOKOTELA ODUMILE WESIBHEDLELA SASESIBHEDLELA SASEXIANGYA, WABIHLANGABEZANA NEMICABANGO YAKHE YOKUPHATHWA KOKUPHELELE KWE-DIABETES MELLITUS TYPE 1
“Ngokuthuthuka komphakathi nokwenza ngcono ukunakekelwa kwezokwelapha, isifo sikashukela sohlobo 1 sesithole ukunakwa okuningi ngokwengeziwe emphakathini nakubasebenzi bezokwelapha, kodwa kusekude ngokwanele. Impilo yezingane ngokomzimba nangokwengqondo idinga ukunakwa nokusizwa okuvela kuzo zonke izindlela zokuphila. Lapha, ngethemba ukuthi umphakathi nezinkampani bakhathazekile ngesifo sikashukela sohlobo 1 nohambo olusha lokuthuthuka nobuchwepheshe bezokwelapha nokudluliswa kothando akumele kuphele! ” Lapho ekwabelana ngokuphathwa okuphelele kwesifo sikashukela sohlobo 1, uSolwazi Zhou Zhiguang wadlulisa icala.
ISINOCARE DIABETES FOUNDATION CHARITABLE FOUNDATION YAYINIKELELE EKAMPINI LASEKHAYA LEXIANGYA
I-WIT120 yenza impilo ibe yinhle futhi isisa senhliziyo senza umhlaba ube indawo engcono. Kokubili kulindelwe futhi kuyinjongo okufanele sisebenzise uthando ukuveza uhlelo oluhle lwempilo ukwenza injabulo ihlale inathi. Lesi sikhathi se-Comprehensive Health saphela sihambisana nomcimbi wokunikela ofudumele. ISinocare Diabetes Charitable Foundation inikele ngeXiangya Kangle Camp enakekela abantu abanesifo sikashukela abanesifo sikashukela sohlobo 1. Abamele izinkampani ezibambe iqhaza, kubandakanya iSinocare Inc., ngokuhlanganyela banikeze izifiso zabo ezinhle futhi banethemba lokuthi inkonzo yomphakathi enempilo, efana IKangle Camp, iyoba ngcono futhi ibe ngcono. Babenethemba lokuthi i- "Medical + Charity" ingathola ukunakwa okuningi kubantu, futhi abantu abavela kuzo zonke izizinda zempilo, kanye nabanye ababambiqhaza, bazojoyina le misebenzi yenhlalakahle yomphakathi.
Ikhasi Langaphambili: Ingqungquthela yokuqala yabathengisi beSinocare Ebanjelwe eDelhi
Ikhasi elilandelayo: USinocare uhambele i-2018 Middle Medlab East eDubai